တကယ်မရှိတဲ့ အရာတွေကို မြင်နေရပြီလား? ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နေတဲ့အချိန် စကားသံတွေ ကြားနေရပြီလား? ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ... -
တကယ်မရှိတဲ့ အရာတွေကို မြင်နေရပြီလား? ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နေတဲ့အချိန် စကားသံတွေ ကြားနေရပြီလား? ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ…
Posted on January 3, 2019 January 3, 2019 Author For Her Myanmar	Comment(0)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကြားအမြင်တွေ ရနေတယ်လို့တော့ မထင်စေလို…
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဖြစ်စေ၊ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပေါ့သွပ်သူတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့တွေမှာ သူတို့ စိတ်ထင်ရာ၊ အတွေးထဲမြင်ရာ အရာအားလုံးကို ထုတ်ပြောနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်းအကြောင်းကို ယောင်းတို့ သိစေဖို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်း ရောဂါဆိုတာ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် အမှန်ကို မသိမြင်နိုင်ဘဲ အတုအယောင် ပုံရိပ်နဲ့ အသံတွေကို ကြားယောင် မြင်ယောင် ထင်ယောင်နေခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ အထင်မှားခြင်း၊ မရှိတဲ့ အရာတို့ကို ထင်ယောင်မြင်ယောင်ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါ သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါ တစ်ခုခုရှိချိန်
ပြင်းထန်သော စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေ စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေရထားချိန်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်းဆိုတာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆများ
ဒီအခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတော့
အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေး တားမြစ်ဆေးတွေ သုံးစွဲခြင်း စတာတွေ ပါဝင်နေသလို
အလွန်စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ကြုံရခြင်း (ဥပမာ- မိမိချစ်ခင်ရသူ တစ်စုံတစ်ဦးအား မမျှော်လင့်ဘဲဆုံးရှုံးရခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုခံရခြင်း) ၊
အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ စတဲ့ ရောဂါတွေမှာလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ (Schizophrenia) နှင့် စိတ်အတက်အကျမြန်ရောဂါ (Bipolar disorders) တို့၏ လက္ခဏာ တစ်ခုအနေနဲ့လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်တွေ မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ အခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းများကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရပါမယ်။
Related Article >>> စိုးရိမ်လွန်ကဲ စိတ်ရောဂါဆိုတာ
စောလျင်စွာ ကုသခြင်း (ပထမဆုံး စိတ်ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်ချိန်မှာ ကုမယ်၊ သိသိချင်းကုမယ်ဆိုရင်) ဖြင့် အလုပ်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်ခြင်းတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန် အကြံပေးချက်အတိုင်း ကုသသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးသူကိုဖြစ်စေ အန္တရာယ်ပြုနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးရှိနေခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးရုံတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း (Counseling) နဲ့ အတူ Cognitive Behavioural Therapy ၊ Supportive Psychotherapy ၊ Cognitive Enhancement Therapy ၊ Family Psychoeducation and Support အစရှိတဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ကုသခြင်းတွေကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ ကုသသင့်ပါတယ်။ မိသားစုရဲ့ နွေးထွေးမှု၊ အကူညီပေးမှု၊ ထောက်ပံ့မှုတွေကလည်း တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Dr. Louis
Reference link: https://www.webmd.com/schizophrenia/guide/what-is-psychosis#2
ဤဆောင်းပါးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
<<< Unicode >>>
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အကွားအမွငျတှေ ရနတေယျလို့တော့ မထငျစလေို…
ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှမှော ဖွဈစေ၊ အပွငျပတျဝနျးကငျြမှာ ဖွဈစေ၊ စိတျပေါ့သှပျသူတှကေို တှရေ့တတျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့တှမှော သူတို့ စိတျထငျရာ၊ အတှေးထဲမွငျရာ အရာအားလုံးကို ထုတျပွောနတေတျကွပါတယျ။ ဒီလို စိတျပေါ့သှပျခွငျးအကွောငျးကို ယောငျးတို့ သိစဖေို့အတှကျ ဒီဆောငျးပါးလေးနဲ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…
စိတျပေါ့သှပျခွငျး ရောဂါဆိုတာ ပွငျပပတျဝနျးကငျြ အမှနျကို မသိမွငျနိုငျဘဲ အတုအယောငျ ပုံရိပျနဲ့ အသံတှကေို ကွားယောငျ မွငျယောငျ ထငျယောငျနခွေငျးကို ဆိုလိုတာပါ။ အထငျမှားခွငျး၊ မရှိတဲ့ အရာတို့ကို ထငျယောငျမွငျယောငျဖွဈခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတို့ ပါဝငျပါတယျ။
စိတျရောဂါ သို့မဟုတျ ခန်ဓာကိုယျရောဂါ တဈခုခုရှိခြိနျ
ပွငျးထနျသော စိတျဖိစီးမှုဖွဈစေ စိတျဒဏျရာဖွဈစရေထားခြိနျတှမှော ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
တကယျတော့ စိတျပေါ့သှပျခွငျးဆိုတာ ရောဂါတဈခုမဟုတျဘဲ အခွအေနတေဈရပျကို ချေါဆိုခွငျးသာဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> စိတျကရြောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး လှဲမှားနတေဲ့ အယူအဆမြား
ဒီအခွအေနကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒီအကွောငျးရငျးတှထေဲမှာတော့
အရကျနဲ့ မူးယဈဆေး တားမွဈဆေးတှေ သုံးစှဲခွငျး စတာတှေ ပါဝငျနသေလို
အလှနျစိတျထိခိုကျစရာကောငျးတဲ့ ဖွဈရပျတှနေဲ့ ကွုံရခွငျး (ဥပမာ- မိမိခဈြခငျရသူ တဈစုံတဈဦးအား မမြှျောလငျ့ဘဲဆုံးရှုံးရခွငျး၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုခံရခွငျး) ၊
အယျဇိုငျးမားရောဂါ စတဲ့ ရောဂါတှမှောလညျး တှရေ့နိုငျပါတယျ။
စိတျကစဉျ့ကလြားရောဂါ (Schizophrenia) နှငျ့ စိတျအတကျအကမြွနျရောဂါ (Bipolar disorders) တို့၏ လက်ခဏာ တဈခုအနနေဲ့လညျး ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
စိတျရောဂါပညာရှငျမြား သို့မဟုတျ ဆရာဝနျတှေ မေးမွနျးစဈဆေးခွငျးအားဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။ ဖွဈပှားရတဲ့ အကွောငျးရငျးနဲ့ အခွားဆကျနှယျနတေဲ့ အကွောငျးရငျးမြားကို ရှာဖှစေဈဆေးရပါမယျ။
Related Article >>> စိုးရိမျလှနျကဲ စိတျရောဂါဆိုတာ
စောလငျြစှာ ကုသခွငျး (ပထမဆုံး စိတျကယောငျခြောကျခြားဖွဈခြိနျမှာ ကုမယျ၊ သိသိခငျြးကုမယျဆိုရငျ) ဖွငျ့ အလုပျ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုကျခွငျးတှကေနေ ကာကှယျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဆရာဝနျ အကွံပေးခကျြအတိုငျး ကုသသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျကိုယျတိုငျဖွဈစေ၊ တဈပါးသူကိုဖွဈစေ အန်တရာယျပွုနိုငျမယျ့ အခွအေနမြေိုးရှိနခေဲ့ရငျ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ကိုယျ့စိတျကို မထိနျးခြုပျနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ဆေးရုံတကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးခွငျး (Counseling) နဲ့ အတူ Cognitive Behavioural Therapy ၊ Supportive Psychotherapy ၊ Cognitive Enhancement Therapy ၊ Family Psychoeducation and Support အစရှိတဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျ ကုသခွငျးတှကေို ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှနေဲ့ ကုသသငျ့ပါတယျ။ မိသားစုရဲ့ နှေးထှေးမှု၊ အကူညီပေးမှု၊ ထောကျပံ့မှုတှကေလညျး တကယျကို လိုအပျပါတယျ။
ရေးသားသူ- Dr. Louis
ဤဆောငျးပါးအတှကျ ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tagged Condition, fake, Health, Hear, Mental Disorder, Real, See, things
Health Knowledge Uncategorized
Posted on December 12, 2016 March 12, 2017 Author
ချဉ်ငံစပ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းနီးပါး ကြိုက်ကြပါတယ်။ ငရုတ်သီးလေးတွေမှာ အံ့မခန်းအစွမ်းသတ္တိတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ငရုတ်သီးစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြဦးစို့။
Posted on October 16, 2018 Author မယ်တင် (ဆေး-၁)
သိကို သိထားသင့်ပါတယ် ယောင်းတို့!
Posted on February 2, 2017 February 2, 2017 Author Christina Rosy
ဟင်းချက်တတ်ခြင်းအားဖြင့် အစားတစ်လိုင်းပျိုမေတို့အတွက် အထူးအခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေမှာပါ။ “မိန်းကလေးပဲ၊ ဟင်းချက်တတ်ရမှာပေါ့” လာမပြောနဲ့။ မိန်းကလေးမို့ ယောက်ျားလေးမို့ဆိုတဲ့ စကားဟာအင်မတန် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်းပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ချက်လိုက်ရင် “ဟင်းတစ်ခွက်” ဖြစ်လာဖို့ကအဓိကပဲ။ ဒါနဲ့ ပျိုမေတို့ဟင်းချက်တတ်ရင် ဘာတွေအကျိုးထူးမလဲ သိချင်လား။ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ၁။ပိုက်ဆံသက်သာတယ်။ သက်သာမှာပေါ့။ အရင်က ဟင်းမချက်တတ်တဲ့အခါ ဟိုဆိုင်ထွက်ဒီဆိုင်စား၊ တွေ့ကရာ သွားရည်ကျနေတော့ ရတဲ့မုန့်ဖိုး ပျံလွင့်သွားတာ မဆန်းကြယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပါ့ကိုယ် ဟင်းချက်တတ်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တာလည်း လုပ်စားလို့ရသလို့ ပိုက်ဆံကုန်ကျတာလည်း အတော်သက်သာတယ်လေ။ ၂။ ကြွားလုံးထုတ်လို့ရ။ ချက်သမျှဟင်းခွက်တွေကို မစားခင်လေး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်၊ အင်စတာဂွမ်ပေါ်တက်ကြွားလို့ရလည်း နည်းလား။ ၃။ တီထွင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်။ အကောင်းပြောတာနော်။ ဟင်းချက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ခြားသူတွေထွက် တီထွင်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်လာစေပါတယ်။ ကိုယ့်ဟင်းလျာကို ဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေ ထပ်ထည့်သင့်သလဲ စသဖြင့်တီထွင်ကြံဆတာကြောင့် […]
ပြင်ဦးလွင်သွား တောလား …
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သောနိုင်ငံများ
အမူအရာမဲ့ မျက်နှာနဲ့ စကားပြောတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လန်ကျန့် တစ်ဖြစ်လဲ ဝမ်ရိပေါ် (Wang Yibo)အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
Posted on July 15, 2019 July 15, 2019 Author Ei Mon
(၁)နှစ်ကနေ (၆)နှစ်အတွင်း သားသားမီးမီးတွေကို သွန်သင်ထိန်းကျောင်းဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၅) သွယ်
Posted on July 5, 2019 Author Stella
Posted on July 5, 2019 July 5, 2019 Author Khine
လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးတွေအများကြီး ရခဲ့ရတဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ “Women of Tomorrow-II”
Posted on July 5, 2019 July 5, 2019 Author Wathun
Call us : 09424409727, 09 973476115